Nisaona Ny Bilaogera Tany India: Maty Tampoka I Shakti Bhatt · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2018 2:09 GMT
(Tamin'ny 5 Aprily 2007 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Maty tampoka tany Delhi taorian'ny aretina tampoka sy tsy nampoizina nahazo azy teo amin'ny faha dimy ambiroampolo taonany i Shakti Bhatt ary nisaona izany ireo bilaogera tany India. Toniandahatsoratra tao amin'ny trano famoahan-gazety IBD izay novokarin'ny Bracket Books vao haingana i Shakti ary vadin'ny poety Indiana malaza Jeet Thayil .
Namoaka ny sombiny tamin'ny antsafa niarahany tamin'i Shakti ilay bilaogera mpanao gazety monina ao Delhi Jai Arjun Singh , izay nahitana ny hafanam-pony velom-panantenana hatrany tamin'ny mpanoratra sy ny mpamaky azy -
Tsy izaho no voalohany nilaza fa afaka manao zavatra tsara kokoa isika miaraka amin'ny fitantarana tsy foronina. Mora kokoa ny miteny noho ny manatontosa, satria mila manao fikarohana sy fitsidihana mialoha ireo mpanoratra, ary vitsy ny mpanao matoandahatsoratra indiana no mazoto mamoaka vola ho amin'izany. Azo lazaina fa tsy hanenenana ny vola lany, indrindra raha manana drafitra ara-barotra hamerenana izany, ary mahasahy kokoa miroso amin'izany ireo mpanao matoandahatsoratra lehibe , raha misy ny azo atao. Mendrika ny omena fanohanana ihany koa izany indrindra noho ny tsy fahampian'ny fahaiza-mamorona amin'ny asa fanaovan-gazety ao India.
Nanoratra lahatsoratra iray mampihetsim-po momba ny finamanany tamin'i Shakti ilay bilaogera mpanao gazety monina ao Mumbai eM - izay inoan'ny maro fa hahavita zava-dehibe amin'ny sehatry ny literatiora Indiana atsy ho atsy -
Rehefa mahatsiaro azy aho dia tsaroako ny mipetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininy mijery ny houla hoop, mandroso sy miverina, mitsiky, mampandihy valahana, manetsika tanana. “Lehilahy manam-bintana ianao,” hoy aho tamin'ny vadiny indray mandeha, niaraka tamin'ny karazana zava-miafina tao anatin'io houla hoop io ary nitsiky tamiko izy sady niteny hoe “eny, fantatro.”
Nanoratra momba ny nofinofiny nozarainy niaraka tamin'i Shakti ilay mpanoratra sady bilaogera Nisha Susan -
Volana vitsivitsy monja no nahafantarako azy kanefa taona maro no hitako nanoloana anay, nandeha ny fotoana, satria nanoratra sy nahita izao tontolo izao izahay. Tokony nahafantatra ahy ny olona ary nalaza aho. Izy no ilay bibidia hafahafa tsy mbola fahitan'ny olona hatrizay, mpanao matoandahatsoratra mahomby niaraka tamin'ny fitsipika tsy misy kianina sady mpanoratra matotra.
Namoaka lahatsoratra mahafinaritra iray mikasika ny fahavitrihan'i Shakti ny bilaogera desi lit iray monina ao Delhi, Nilanjana Roy-
Iray amin'ireo trano misokatra indrindra tao amin'ny tanàndehibe iray izay tena mandray vahiny ny tranon'i Jeet sy Shakti. Teo anivon'ireo takariva ireo hatrany i Shakti, ilay nandrisika anay hanandrana ny hula hoop, mba hanao andrana amin'ny fanoratana adaladala, mba hamaky tononkalo matotra amin'ny fomba tsy matotra tena matotra. Nino ny maha-zava-dehibe ny hanihany izy, ary hitako fa niala voly tanteraka aho, nifalifaly tao anatin'ny fotoana fohy niaraka taminy .
Ilay mpanoratra fanta-daza Indiana monina any Etazonia, Amitava Kumar, ilay bilaogera desi lit avy any Mumbai, Peter Griffin, ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety avy ao Azia Atsimo (SAJA) sehatra Fifanakalozan-kevitra an'i Arun Venugopal, ilay bilaogera Indiana any New York Anand Taneja, ilay mpanao gazety bilaogera monina ao Delhi Shivam Vij ary ilay mpanoratra momba ny fizahan-tany monina ao Delhi Lesley Esteves dia samy namoaka lahatsoratra mampihetsi-po natao ho fahatsiarovana an'i Shakti avokoa.
Farany, nanokatra ny bilaogy Tsiaro an'i Shakti ny naman'i Shakti sy Jeet, ary nanasa ny mpamaky hametraka fahatsiarovana ho an'i Shakti, na hafatra ho an'i Jeet.
Tsy mbola nahafantatra an'i Shakti aho, kanefa rehefa novakiako ny momba azy tao anatin'ny andro vitsy dia fantatro fa vehivavy be fitiavana, mavitrika sy manan-talenta izy. Miara-miory amin'ireo namany sy ny fianakaviany aho raha misaona ny fahatsiarovana azy izy ireo.